नयाँ मौद्रिक नीतिको मस्यौदा तयार गर्दै राष्ट्र बैंक, तरलता व्यवस्थापनमा जोड ! - Laltin Media
Home»आर्थिक समाचार»नयाँ मौद्रिक नीतिको मस्यौदा तयार गर्दै राष्ट्र बैंक, तरलता व्यवस्थापनमा जोड !
नयाँ मौद्रिक नीतिको मस्यौदा तयार गर्दै राष्ट्र बैंक, तरलता व्यवस्थापनमा जोड !
नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिको मस्यौदा तयार गर्न थालेको छ । राष्ट्र बैंकले जेठ मसान्तसम्मको आर्थिक सूचकहरुलाई आधार मानेर मौद्रिक नीतिको खाका तयार गर्न थालेको हो ।
मौद्रिक नीतिको खाका कोर्नका लागि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आफ्नै प्रमुख संलग्नता हुने गरी मौद्रिक नीतिको तयारी शुरु गरेका छन् । जेठ १७ गतेदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सम्बन्धी सुझावहरु लिन थालेको छ । आएका सुझावहरुलाई समेत राष्ट्र बैंकले केलाउने र सरोकारवालाहरुसँग छलफल समेत गर्ने तयारी भइरहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
तरलता व्यवस्थापनमा जोड
आर्थिक वर्ष शुरु भएको दुई, तीन महिनादेखि नै बैंकवित्तमा देखिएको तरलता अभाव अझैँ समाधान हुन सकेको छैन । राष्ट्र बैंकका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा आएका सुझावहरुलाई प्राथमिकता दिने तरलता व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिइने छ । गभर्नर अधिकारीले पनि सोही अनुसार सर्कुलर गरेको बुझिएको छ ।
#nrb monetary policy